Ciyaartoy ka socota Somalia oo tagay Uganda si ay uga qayb qaataan Tartan halkaas ka dhacaya | Shabakada Alshahid
Added by Webmaster on November 10, 2012.
Kampala (Alshahid)- Naadiga Kubadda Cagta ee loo yaqaan Xidigaha Bad-waynta ayaa iyagoo matalaya dalka Somalia waxay u dhoofeen wadanka Uganda. Halkaasna waxay u tageen ka qayb galka Ciyaaro heer gobal ah oo dhawaan dhacaya.
Xiriirka Kubadda Cagta Somalia ayaa arrintan xaqiijiyay. Wuxuuna intaa ku daray in Kooxdu ay u dhooftay Uganda maalintii Shalay, inkasta oo la qorsheynayay ina Khamiistii lasoo dhaafay halkaas tagaan balse dib u dhac uu yimid.
Xoghayaha Xiriirka Soomaaliyeed ee Kubadda Cagta Abdi-Qani Siciid Carab ayaa u sheegay Warfidiyeenka in Kooxda Xidigaha Bad-wayntu ay Laba Todobaad tababar ku qaadanayso Kampala si ay isugu diyaariso Tartanka CECAFA Cup oo dalalka Bariga iyo Bartamaha Africa loo qabto.
Tartanku wuxuu furmayaa sida Xoghayaha lagasoo xigtay November 24 oo dhowr dhowr Todobaad ay inaga xigaan.
Xubnaha Naadigu waxay ka koobanyihiin 21. Waxaa la socda Tababare iyo madaxa Wafdiga.
Ciyaartoyda Naadiga waxaa ka mid ah 7 Ciyaar-yahan oo ka kala yimid dalalka UK, Holland, USA iyo mid ka yimid wadanka Kuwait. Dhamaantoodna waxay maalinta Berrito ah ayeey ku biiri doonaan Wafdiga gaaray Kampala.
Xoghaye Cabdi Qani oo hadalkiisa sii wata ayaa xusay in Xiriirka Kubadda Cagta dalku uu dadaal dheer sameeyay si loo diyaariyo waxayaabaha fududeynayo tabbaro la siinayo Kooxda ka hor bilaabashada Tartanka ay ka qayb galayaan.
Xoghayuhu wuxuu carabka ku dhuftay inay jirto rajo uu dalka Somalia leeyahay Sanadkan marka Ciyaaraha Kubadda Cagta ee gobalka loo eego.
Cabdi-qani Saciid Carab ayaa mahadcelin u jeediyay tababarayaasha Xiriirka Kubadda Cagta ee Somalia ee dalka dibadiisa jooga, kuwaas oo uu sheegay inay soo saareen Ciyaartoy xirfad leh.
Xafiiska Warfaafinta ee Xiriirka Kubadda Cagta Somalia